China 200w Ufi China Manufacturers & Suppliers & Factory
200w Ufi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 200w Ufi)
200 Watt LED High Bay UFO Mbara Anya 5000K
200 Watt LED High Bay UFO Mbara Anya 5000K Led High Bay 200W Ìhè na- enye ihe karịrị 19500lm dika 600W ọkụ omenala. 200W ufo ọkụ kacha mma maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ntụrụndụ, ụlọ ahịa egwuregwu, ụlọ ọrụ ntanetị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa ahịa na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ...
Ìhè Led Stadium Ìhè 200W 24000LM 5000K
Ìhè Ìhè nke 200w anyị nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Light Light 250w Philips a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ . Nke a Hyperikon Led Stadium Light 200w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, ihe eji eme ka mmiri...
Igwe ọkụ eletrik Mast a 1200W 25m nwere ọnụọgụ 1560,000lumens. Akwa Mast Light Light Polo dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nke a buru ibu Led High Mast bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ngosiputa nke...
200W High Bay Pendant Light Retrofit Kit
The High Bay Retrofit Kit 200w bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a 200w High Bay Pendant Lighting bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. The High Bay bọlbụ dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Anyị na- ekesa nnukwu ọnụ mmiri anyị bụ CE ROHS ETL DLC. Nke a High Bay Installation eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi ihe...
200w High Bay na-acha ọkụ bọl na sensọ
Akwa Akwa Akwa Azụ 200w bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a 200w High Bay sensọ bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. The High Bay bọlbụ dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Eji ọkụ ọkụ na-eme ka e nwee ọkụ ọkụ bụ EC ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a dị elu mmiri 400 watt metal halide eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi...
200W mere ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ ufo
200W mere ka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ ufo 1. mee ka nnukwu ụlọ ọrụ dị elu ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. UFO ulo oru mmanu ulo oru IP65 waterproof maka ojiji ozo, mmiri na aja na-eguzogide. 3. 200W eduziri ogbako ihe omumu bụ ihe ngosi mara mma. Obere...
Ulo Ogwu Ugbo Ogugu Nkeji 200w
Ụlọ ọrụ ọkụ na-ekpuchi Led 200w bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a na Amazon Led Warehouse Lighting bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Led dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Ụlọ nkwakọba ihe anyị na-eduzi bụ CE ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a mere bankamon ụlọ nkwakọba ihe eji maka ebe a na-adọba...
Edlọ ndozi High Bay Lighting 200W
Ngwurugwu Led Warehouse 200W bụ lumens 26,000 na 130lm / w. Nnukwu ọkụ ga-enwu ọkụ nke ụlọ nchekwa Bay bụ imewe DOB na enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Nnukwu relọ Ahịa Led Led Lighting dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Ngwongwo ụlọ nkwakọba ihe anyị butere bụ CE ROHS ETL DLC masịrị ya. Nke a butere guayama ụlọ nkwakọba...
Ebube Ụlọ Nlekọta Azụmahịa 200W 26000LM
Ogologo Ugbo Ogologo 200W Na- acha Osisi dị 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a na- ere ọkụ ọkụ Canada bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Ụlọ ọkụ na-ere ọkụ na Led Uk dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Ebe nchekwa ụlọ anyị na- enwu gbaa bụ EC ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a mere ụlọ nkwakọba ihe eji maka ebe a na-adọba...
Nnukwu ọkụ ọkụ Pendant Lighting na 200W Led na Motion Sensor
Ngwongwo Pendant LW 200W Led Led bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a na Led Warehouse Lighting with Motion Sensor bụ imewe DOB na enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Nnukwu Llọ Nkwakọba Ama dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Igwe ọkụ anyị dị elu 400w bụ CE ROHS ETL DLC masịrị ya. Igwe ihe mgbako a na-eme ka ọkụ dị elu eji...
200W Led Warehouse Light Bulbs 26000LM 5000K
Umu Mmiri Nsiri nke 200W Na-ewu ulo bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a na- enwu ọkụ ọkụ ọkụ bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. The Led Warehouse Light Amazon dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Ọnụ mmiri anyị dị elu na-eduga ụwa bụ EC ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a dị elu mmiri ọkụ ọkụ eji maka ebe a na-adọba...
200W Led Warehouse High Bay Lighting 26000LM
Ihe 200W Led High Bay Lighting Review bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a na- ere ọkụ dị elu Bay bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ Led High Bay 200w dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Akụkụ ọkụ anyị dị elu bụ EC ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a mere ka e jiri ọkụ ọkụ mmiri dị elu 400w mee maka...
200w Ufi 200W UFI 200W Ufo High Bay 200w Ufo Led High Bay 100W Ufo Light 200W Ewube Uche 200w Ufo High Bay Light Ufo 200W ori